Jobho 11 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Zofari anotanga kutaura (1-20)
Anopomera Jobho kuti ari kutaura zvisina musoro (2, 3)
Anoudza Jobho kuti asiyane nezvakaipa (14)
11 Zofari+ muNaama akapindura achiti: 2 “Mashoko ese aya angarega kupindurwa here,Kana kuti kutaura zvakawanda kuchaita kuti munhu anzi akarurama here?* 3 Kutaura zvisina musoro kwauri kuita kunganyararidza vanhu here? Pangashayikwa munhu anokutsiura pamashoko ako ekunyomba here?+ 4 Nekuti unoti, ‘Kudzidzisa kwangu kwakachena,+Uye ndakachena mumaziso enyu.’+ 5 Asi dai Mwari aizotauraOshama muromo wake kwauri!+ 6 Aizokuudza zvinoita kuti uve munhu akachenjera,Nekuti pane zvakawanda zvinofanira kuzivikanwa nezveuchenjeri hwechokwadi. Waibva waziva kuti Mwari anobvumira kuti zvimwe zvikanganiso zvako zvirege kuyeukwa. 7 Ungaziva zvinhu zvakadzama zvaMwariKana kuziva zvese nezveWemasimbaose* here? 8 Uchenjeri hwakakwirira kupfuura denga. Iwe ungaitei? Hwakadzika kupfuura Guva.* Chii chaunoziva? 9 Hwakareba kupfuura nyika,Uye hwakafara kupfuura gungwa. 10 Kana iye akapfuura, obata munhu ounganidza dare,Ndiani angamurambidza? 11 Nekuti anonyatsoziva kana vanhu vachinyengera. Paanoona zvakaipa, angazvisiya zvakadaro here? 12 Asi munhu asingafungi angatonzwisisa cheteKana dhongi remusango rabereka munhu.* 13 Dai waingogadzirira mwoyo wakoUye waitambanudzira maoko ako kwaari. 14 Kana ruoko rwako ruchiita zvakaipa, ruise kure,Uye kusarurama ngakurege kugara mumatende ako. 15 Nekuti uchabva wasimudza chiso chako usina chinoshoreka pauri;Uchamira wakasimba, usina chaunotya. 16 Nekuti uchabva wakanganwa kutambura kwako;Uchakuyeuka semvura yakayerera ichipfuura nepauri. 17 Upenyu hwako huchajeka kupfuura masikati makuru;Kunyange rima rahwo richaita semangwanani. 18 Uchava nechivimbo nekuti panenge paine tariro,Uye uchatarisa kwese kwese, worara wakachengeteka. 19 Ucharara pasi, pasina anokutyisa,Uye vanhu vakawanda vachada kufarirwa newe. 20 Asi maziso evakaipa achatadza kuona;Uye vachashaya kwekutizira,Uye tariro yavo ichangova yerufu.”*+
^ Kana kuti “munhu anotaura achizvikudza achanzi akarurama here?”
^ Kana kuti “kuziva panogumira Wemasimbaose.”
^ Kana kuti “Kana dhongi remusango rikaberekwa riri munhu.”
^ Kana kuti “yekuparara kwemweya yavo.”